45 နောက်ပြန်လှည့်စေမည့်လွမ်းဆွတ်ဖွယ်စကားစုများ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
လွမ်းဆွတ်မှုသည်စိတ်ခံစားမှုကိုတွေ့ကြုံသောအခါဆန့်ကျင်မှုရှိနိုင်သည်ဟူသောအလွန်လူ့ခံစားချက်ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုသင်လက်လွှတ်လိုက်သောအခါသင်အိမ်ပြန်လာသည်ကိုခံစားရသည်။ ၎င်းသည်အကွာအဝေးကြောင့်သို့မဟုတ်လူတစ် ဦး ကွယ်လွန်သွားသည့်အခါသို့မဟုတ်ဘဝများသည်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းခရီးကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်လွဲချော်သွားနိုင်သည်။ ဤအရာသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေပါကထိုသူအားဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။
သို့သော်လွမ်းဆွတ်မှုသည်ငြင်းပယ်။ မရသည့်ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ကူညီသည်။ အတိတ်ကိုလွမ်းဆွတ်ခြင်း၊ အခြားအချိန်များကိုလွဲချော်ခြင်း၊ ပစ္စုပ္ပန်၌ပျော်မွေ့ခြင်းမရှိသောအခြားအတွေ့အကြုံများလည်းဖြစ်သည်။ လွမ်းဆွတ်မှုသည်နှလုံးသား၌ထွင်းထုထားသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်ကျန်ရှိနေသည့်အဖြစ်မှန်၌အသက်ရှင်နေသည်။
အောက်တွင်သင့်အားလွမ်းဆွတ်စေသောစကားစုအချို့ကိုသင်ပေးလိုပါသည်။ သို့မှသာသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလူသားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်သွယ်နိုင်သည့်ဤခံစားချက်ကိုသင်ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။
တောင့်တမှုကိုမလျှော့ချပါနှင့် လမ်းကိုသွားပါ အိမ်နီးချင်းမြို့တစ်မြို့၊ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုသို့သွားပါ။ သို့သော်အတိတ်ကာလသို့မရောက်ပါနှင့်။ (ပါဘလိုပီကာဆို)
သင်စိတ်သောကရောက်နေချိန်နှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်ကိုမှတ်မိရန် ပို၍ ဝမ်းနည်းစရာမရှိပါ။ (Dante Alighieri)
မနက်ဖြန်အားလုံးကိုပဲမနေ့ကပဲရောင်းမယ် (Kris Kristofferson)
Nostalgia သည်ဟောင်းနွမ်းသောနေ့ရက်များ၏ကြမ်းတမ်းသောအစွန်းများကိုဖယ်ရှားပေးသော archive တစ်ခုဖြစ်သည်။ (Doug Larson)
သင်ဘယ်သောအခါမျှမအသက်ရှင်နိုင်သည့်အရာအတွက်လွမ်းဆွတ်မှုကိုဆုံးရှုံးခြင်းသည်အလွန်ထူးဆန်းသည်။ (Alessandro Baricco)
တကယ်တော့မရှိတော့တဲ့နေရာတစ်ခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသလား။ သင့်စိတ်တွင်သာတည်ရှိသည့်နေရာလား။ (ဂျဲနီလောဆင်)
စိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ ကျန်ရစ်သူများအတွက် ၀ မ်းနည်းခြင်း၊ လွန်ခဲ့သောအချိန်ကာလများအတွက်လွမ်းဆွတ်မှုများ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်လမ်းခရီး၌ရရှိခဲ့သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းများအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ (Dick Van Patten)
လွမ်းဆွတ်မှုအားဖြင့်သယ်ဆောင်သွားသောအခါသူသည်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်နားထောင်ရန်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအချိန်အမှတ်တရများကိုမြတ်နိုးရန်သီချင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ (ဖာနန်ဒို Trujillo Sanz)
လွမ်းဆွတ်မှု, သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ဒု။ ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးကြည့်ပြီးငါတို့အမှတ်တရတွေဟာ monochrome ထဲရောက်သွားတယ်။ (Angela Carter)
ငါ့အိမ်ကိုစဉ်းစားရင်းထူးဆန်းတဲ့ခေါင်မိုးပေါ်ငါမိုးရွာရွာမှာအကြိမ်ကြိမ်နေခဲ့ဖူးတယ်။ (William Faulkner)
အိပ်ချင်နေတဲ့သူတွေဟာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲအိပ်မက်ဆိုးတွေအတွက်လွမ်းဆွတ်မှုကြောင့်ပါ။ (Gabriel Garcia Marquez)
သူတို့ကသင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုသတိရတဲ့အခါသူတို့ဟာအလားတူခံစားမှုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာမင်းကိုလွမ်းနေတာငါမမှတ်မိနိုင်ဘူးလို့ငါမထင်ဘူး (အက်ဒ်နာစိန့်ဗင်းဆင့်မီလာ)
ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူနံနက်, မွန်းတည့်နှင့်ညနေပိုင်းချင်တယ်။ မင်းရဲ့မျက်ရည်၊ အပြုံးတွေ၊ နမ်းတာတွေကို ... မင်းဆံပင်ရဲ့အနံ့၊ သင့်အသားအရေရဲ့အရသာ၊ ငါ့မျက်နှာပေါ်ရှိသင်၏အသက်ရှူမှုတို့လိုချင်တယ်။ ငါနောက်ဆုံးဘဝ၌သင့်ကိုတွေ့မြင်ချင်သည်။ ငါနောက်ဆုံးအသက်ရှူစဉ်သင့်လက်၌ရှိလိမ့်မည်။ (Lisa Kleypas)
သင်မသိသောတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးနေသည်ဟုခံစားရခြင်းသည်ထူးဆန်းသည်။ (David Foster Wallace)
ပစ္စုပ္ပန်မတည်ရှိပါဘူး, ကထင်ယောင်ထင်မှားများနှင့်တောင့်အကြားအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ (Lorenzo Villalonga)
ဘ ၀ ဟာဘယ်လောက်မြန်မြန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားနိုင်သလဲ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာအလွန်နှေးကွေး၊ ချိုမြိန်ပြီးထာဝရတည်ရှိနေပုံရသည်။ (Graham Swift)
ဒီနူးညံ့ပြီးရယ်စရာကောင်းတဲ့လွမ်းဆွတ်မှုတွေကြောင့်ငါ့အတွင်းပိုင်းမှာတစ်ခုခုကျန်နေသေးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ (Steve Almond)
ဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းချုပ်လုပ်ထားပါစေလူတစ်ယောက်ကိုတောင့်တခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အူများကိုအစားထိုးတဲ့အခါအသက်ရှင်ရန်ခက်ခဲသည်။ အဆုံးစွန်သောနေရာသည်ယခင်နေရာထက်ပိုမိုနေရာယူထားပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က၎င်းကိုအမြဲတမ်းခံစားနေရသည်။ ထို့အပြင်မိမိကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားရန်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခံရခြင်းသည်မည်သည့်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်သည်! (Marcel Proust)
စစ်မှန်သောလွမ်းဆွတ်မှုသည်အဆက်ပြတ်နေသည့်အမှတ်တရများဖြစ်သည်။ (Florence King)
သင်၏မှတ်ဉာဏ်သည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်နှင့်တူသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်စိတ်ထဲလှည့်လည်သွားတဲ့အခါမင်းဆီကိုအမြဲတမ်းလမ်းပြန်လျှောက်သွားတယ်။ (ဆူဇူကီးဖား)
ငါနင့်အနားမှာအမြဲရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ငါမပြောချင်ဘူး၊ (Stephanie Laurens)
စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်လူသား၏အောင်မြင်မှုအကြား၌သူ့တောင့်တမှုဖြင့်သာဖြတ်သန်းနိုင်သောနေရာတစ်ခုရှိသည်။ (Kahlil Gibran)
သင်ထွက်ခွာသွားသောနေရာ၌လွမ်းဆွတ်မှုနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းအချို့ရှိသည်။ (David Guterson)
သူကကျွန်မရဲ့ဆံပင်၊ မျက်လုံး၊ ငါဘာလုပ်နေတယ်၊ ​​စဉ်းစားနေတယ်၊ ငါသူ့ကိုစဉ်းစားမစားနိုင်ဘူး။ (Lisa ကြည့်ရန်)
ငါလွမ်းဆွတ်မှုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ အဝေးကိုကြည့်လိုက်သောအခါတစ်ကိုယ်တည်းနေခဲ့ရသည်။ ကြာကြာမနေနိုင်တော့ဘဲမည်သို့ပိတ်ဆို့ရမည်ကိုမသိတော့ပါ။ (နစ်ရှေး)
တောင့်သည်ဆားတိုင်မဖြစ်မီလမ်းဖြစ်သည်။ (Enrique Múgica)
လွမ်းဆွတ်မှုသည်ဖြားယောင်းသွေးဆောင်သောမုသားဖြစ်သည်။ (George Wildman Ball)
ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအရာများအတွက်လွမ်းဆွတ်မှုသည်တစ်ခါမျှမကြုံဖူးသောအရာများကြောင့်အိမ်မှုကိစ္စထက်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ (Mignon McLaughlin)
အချိန်သည်ဆရာကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းကံမကောင်းစွာဖြင့်သူသည်ကျောင်းသားအားလုံးကိုသတ်ပစ်သည်။ (Hector Louis Berlioz)
ငါတို့နောက်ကြောင်းကိုပြန်လှည့်ကြည့်မှလွဲရင်ငါတို့ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေကိုသတိမထားမိလိုက်တာကထူးဆန်းနေတယ်။ (Joe Abercrombie)
တစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးသည့်အရာတစ်ခုကိုတောင့်တခြင်းထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်လွမ်းဆွတ်မှုမရှိပါ။ (Joaquin Sabina)
အရာတွေဟာသူတို့အရင်ကမဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ (Will Rogers)
ကောင်းလေစွ! ကျွန်တော်အရမ်းမပျော်ဘူး။ (အလက်ဇန်းဒါးဒူမစ်)
လွမ်းဆွတ်မှုသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်၊ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာများအတွက်သင်ငိုသည် (Pete Hamill)
Nostalgia သည်ရှေးခေတ်မှကြမ်းတမ်းသောအစွန်းများကိုဖယ်ရှားပေးသောဖိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ (Doug Larson)
ငါတိုက်ခန်းပတ်ပတ်လည်ကိုမှတ်မိအောင်တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့ရွှေ့လိုက်သည်၊ ၎င်းသည်ပရိဘောဂအပိုင်းအစတစ်ခုသို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာတွင်ဆွဲထားရမှန်းမသိသောပန်းချီကားတစ်ချပ်ကဲ့သို့ရွေ့လျားနေသည်။ (Nathan Filer)
လွမ်းဆွတ်မှုသည်မှုန်ဝါးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သောအရာဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်နာကျင်မှုဖြစ်သည်။ အတိတ်ကာလဝမ်းနည်းခြင်း (Peter Carey)
ငါရှိပြီးသားအရာကိုအဘို့အပြင်းထန်သောလွမ်းဆွတ်မှု, အဆုံးမဲ့နှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သော။ (Juan RamónJiménez)
အတိတ်ဟာရှည်လျားတဲ့အကွာအဝေးဖယောင်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်ရန်ဝေးလွန်းခြင်း၊ (Amy Bloom)
မင်းရဲ့ဘဝကိုထွန်းလင်းစေတဲ့နေမင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်မင်းကိုငါအချိန်တိုင်း၊ နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းငါလွမ်းလိမ့်မယ်။ (Megan Maxwell)
မနေ့ကတစ်ချိန်လုံးစဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်သင့်မှာပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်မရှိနိုင်ပါ။ (Charles Kettering)
သင်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်လွမ်းဆွတ်မှုတွင်နစ်မြုပ်ရန်လွယ်ကူလာသည်။ (Ted Koppel)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » သင့်အားနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်စေမည့်လွမ်းဆွတ်ဖွယ်စကားစု ၄၅ ခု
ကလေးဘဝအတွက်လူမှု - ထိခိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘအုပ်ထိန်းလမ်းညွှန်
သင်၏ဘဝတာ ၀ န်ကိုရှာဖွေရန်ခြေလှမ်းများ